Adriano Oo Xaqiijiyay In Uu Ka Tageyn Barcelona Oo Uu Lasii Joogi Doono Muddo
Wakiilka ciyaaryahanka kooxda Barcelona dafaca kaga ciyaara Adriano ayaa sheegay inuu sii jogayo kooxda uusan meel kaga soconin xiligaan.
Adriano oo 27 jir ah ayaa dhawaanahaan waxaa jiray kooxo doonayay kuwaas oo si hoose u shukaansanayay si ay u helaan adeegisa.
Xidiga boosaska badan Adriano ayaa kusoo bilawday Barcelona ciyaaraheeda xiligii hore 13 kulan,waxana la sheegay inay tahay sababta ku qasbi kartay in Adriano kooxda isaga tago.
Wakiilka xidigaan oo lagu magacaabo Paolo Alfonso ayaa sheegay in xidiga Adriano ee uu wakiilka ka yahay meelna kooxda ugu soconin oo uu lasii joogaayo.
“haatan xidiga wuxuu ku maqan yahay fasax waxana uu dib ugu soo laaban doonna naadiga kadib fasaxa halkas oo uu kasii amba qaadi doonno ciyaarihiisa kooxda.
Adriano ayaa ku biiray barelona sanadkii 2010 waxaana ay kasoo iibsadeen kooxda Sevilla ee isla dalkooda.
Wakiilka ciyaaryahanka kooxda Barcelona dafaca kaga ciyaara Adriano ayaa sheegay inuu sii jogayo kooxda uusan meel kaga soconin xiligaan.Adriano oo 27 jir ah ayaa dhawaanahaan waxaa jiray kooxo doonayay kuwaas oo si hoose u shukaansanayay si ay u helaan adeegisa.Xidiga boosaska badan Adriano ayaa kusoo bilawday Barcelona ciyaaraheeda xiligii hore 13 kulan,waxana la sheegay inay tahay sababta ku qasbi kartay in Adriano kooxda isaga tago.Wakiilka xidigaan oo lagu magacaabo Paolo Alfonso ayaa sheegay in xidiga Adriano ee uu wakiilka ka yahay meelna kooxda ugu soconin oo uu lasii joogaayo.
“haatan xidiga wuxuu ku maqan yahay fasax waxana uu dib ugu soo laaban doonna naadiga kadib fasaxa halkas oo uu kasii amba qaadi doonno ciyaarihiisa kooxda.Adriano ayaa ku biiray barelona sanadkii 2010 waxaana ay kasoo iibsadeen kooxda Sevilla ee isla dalkooda.